Decred စျေး - အွန်လိုင်း DCR ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Decred (DCR)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Decred (DCR) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Decred ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $205 707 615.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Decred တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Decred များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
DecredDCR သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$16.06DecredDCR သို့ ယူရိုEUR€13.62DecredDCR သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£12.3DecredDCR သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.14.65DecredDCR သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr145.2DecredDCR သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.101.49DecredDCR သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč358.49DecredDCR သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł60.12DecredDCR သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$21.49DecredDCR သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$22.43DecredDCR သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$359.58DecredDCR သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$124.46DecredDCR သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$87.34DecredDCR သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1204.85DecredDCR သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.2696.32DecredDCR သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$22.04DecredDCR သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$24.33DecredDCR သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿501.53DecredDCR သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥111.9DecredDCR သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1700.94DecredDCR သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩19097.08DecredDCR သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦6078.37DecredDCR သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1183.76DecredDCR သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴444.05
DecredDCR သို့ BitcoinBTC0.00138 DecredDCR သို့ EthereumETH0.0425 DecredDCR သို့ LitecoinLTC0.281 DecredDCR သို့ DigitalCashDASH0.166 DecredDCR သို့ MoneroXMR0.172 DecredDCR သို့ NxtNXT1164.12 DecredDCR သို့ Ethereum ClassicETC2.28 DecredDCR သို့ DogecoinDOGE4468.77 DecredDCR သို့ ZCashZEC0.171 DecredDCR သို့ BitsharesBTS631.93 DecredDCR သို့ DigiByteDGB590.01 DecredDCR သို့ RippleXRP54.71 DecredDCR သို့ BitcoinDarkBTCD0.551 DecredDCR သို့ PeerCoinPPC55.42 DecredDCR သို့ CraigsCoinCRAIG7284.09 DecredDCR သို့ BitstakeXBS681.71 DecredDCR သို့ PayCoinXPY278.95 DecredDCR သို့ ProsperCoinPRC2007.87 DecredDCR သို့ YbCoinYBC0.0086 DecredDCR သို့ DarkKushDANK5125.9 DecredDCR သို့ GiveCoinGIVE34596.27 DecredDCR သို့ KoboCoinKOBO3733.1 DecredDCR သို့ DarkTokenDT14.79 DecredDCR သို့ CETUS CoinCETI46127.99
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 07 Aug 2020 21:45:02 +0000.